Ungamfumana njani umntu kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungamfumana njani umntu kwiTelegram?
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 294
Enye yezona zinto zilula kwaye zikhawulezayo esinokuzenza ngaphakathi kwesicelo seTelegram ikhangela abantu. Iqonga libonelela ngeendlela ezizezinye kwaye ngenqaku elilandelayo siza kukuxelela ezinye zezona zibalulekileyo.
Ukuba umtsha ekusebenziseni esi sicelo semiyalezo kwangoko kwaye awazi ukuba ukhangela njani umntu kuluhlu lwakho lokunxibelelana, subanexhala. Apha sichaza inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandele.
Iindlela zokukhangela umnxibelelwano kwiTelegram
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufumana umntu ngaphakathi kwesicelo seTelegram. Mhlawumbi eyona ndlela ikhawulezayo nelula yokwenza oku kukubeka igama laloo mntu kwindawo yokukhangela.
Kodwa iTelegram ikwavumela ukhetho lwamandla fumana abasebenzisi esingabangezanga kuluhlu lwethu loqhakamshelwano. Ukwenza le nkqubo kulula kakhulu.
Unokukhangela abafowunelwa ngokuthe ngqo kwisicelo esiphathwayo. Into ekufuneka uyenzile kukuvula iTelegram kwifowuni yakho kwaye ucofe uphawu lwepensile. Apho uya kubona uluhlu olupheleleyo lwabo bonke abafowunelwa bakho.
Abafowunelwa obongeze kwincwadi yakho yefowuni vumelanisa ngokuzenzekelayo kwisicelo seTelegram. Oku kwenza ukuba ukukhangela kube lula kwaye kukhawuleze.
Ukuba sele unayo inombolo yomntu ebhaliswe kwiselfowuni Kuya kuvela ngokuzenzekelayo kuluhlu lwakho loqhakamshelwano ngeTelegram.
Unendlela ezininzi zokukhangela umfowunelwa osele umfakile kwincwadi yakho yefowuni:
Enye yeendlela ezilula zokukhangela umntu kwiTelegram kukukhetha "abafowunelwa". Ukufikelela kuyo, kufuneka silandele nje la manyathelo:
Vula usetyenziso lweTelegram
Cinezela kwimigca emithathu ethe tyaba ebonakala phezulu ngasekhohlo kwesikrini.
Cofa kwindawo okhetha kuyo "abafowunelwa"
Ilungile. Iya kubonakala kuwe uluhlu olupheleleyo lwabo bonke abafowunelwa obongeziweyo kwisicelo.
Unokhetho lokumema abanye abantu ukuba bajoyine iTelegram. Unokongeza abafowunelwa abatsha ngolu hlobo lulandelayo:
Cinezela kwiqhosha eliluhlaza elivela ezantsi ekunene kwesikrini.
Bhala igama nefani lomntu omfakayo.
Indica inombolo yomnxeba yomntu.
Ilungile. Umfowunelwa wongezwe ngempumelelo.
Le yenye ye iindlela ezilula nezikhawulezayo ukukhangela umnxibelelwano kwiTelegram.
Cinezela malunga nepensile icon
Ilungile. Ngoku ungabona bonke abafowunelwa obongeze kwiakhawunti yakho.
Khangela umntu ngegama lomsebenzisi
Kukho ukhetho lwe fumana abantu ngegama lomsebenzisi. Nantsi indlela onokuyenza ngayo:
Yiya e ukukhulisa iglasi ebonakala kwikona ephezulu ngasekunene kwaye ucofe kuyo
Kwibha yokukhangela ubhale igama lomsebenzisi lomntu omfunayo kunye ne-voila.
Kwibha yokukhangela awufumani bantu kuphela, kodwa namaqela kunye namajelo. Ngokulula
1 Iindlela zokukhangela umnxibelelwano kwiTelegram
2 Abafowunelwa kwi-ajenda
3 Ukukhetha "abafowunelwa"
4 Ukukhetha "ipensile"
5 Khangela umntu ngegama lomsebenzisi
Ungasasaza njani kuYouTube?
Uwenza njani umzuzu kwi-twitter?